Vaka bhurogi nekukurumidza kweminwe yako | Polyblog
Vaka bhurogi nekukurumidza kweminwe yako
Polyblog Inokubatsira Iwe Kugadzira Zviri nyore Bhurogu Yemitauro Yakawanda Uye Kurisa Bhizinesi Rako Nekushambadzira Kwemukati.
Sei kushandisa polyblog?
1. Fast uye Lightweight
Kukurumidza uye kushanda kwakakosha kune chero bhizinesi. Isu tinozvinzwisisa uye saka takavaka chikuva chinomhanyisa yako yese yemukati yekushambadzira maitiro.
2. Shandura zvirimo zviri nyore
Tarisira chero nyika uye chero mutauro uye ukure bhizinesi rako pasi rese. Uchishandisa yedu yevaridzi Yemukati Management System, unogona nyore kubata yako mitauro yakawanda blog pasi pedhibhodhi rimwe chete.
3. Minimalistic dhizaini
Tinotenda mukupfava. Ndosaka tichiita kuti bhurogi rako richene uye rive nyore mukugadzira. Heino muenzaniso wekuti bhurogi rako richataridzika sei kana iwe ukarivaka nePolyblog.
4. SEO yakagadziridzwa
SEO ndiyo ibwe rekona rezvese zvemukati kushambadzira kuedza. Kuwana organic yekutsvaga traffic kubva kuGoogle kwakakosha kune chero blog. Ndosaka takashandisa zviwanikwa zvakawanda kuita yako blog SEO hushamwari.
5. Yakanyatsogadziriswa hosting
Hapana chikonzero chekubata nemusoro wekutonga maseva ako. Isu tinopa super-nekukurumidza uye yakavimbika webhu saiti.
Zvimwe zvinonakidza chokwadi nezve kushambadzira zvemukati
“77 muzana yevanhu vanogara vachiverenga mablogi paIndaneti”
“67 muzana yevablogi vanotumira zuva nezuva vanoti vakabudirira”
“61 muzana yevashandisi vepamhepo muUS vakatenga chimwe chinhu mushure mekuverenga blog”
1. Register uye setup
Bhalisa nePolyblog uye batanidza Polyblog newebhusaiti yako. Iwe unofanirwa kuisa yako email kero uye webhusaiti domain.
2. Wedzera zvinyorwa
Kana zvinyorwa zvako zvagadzirwa, unogona kuzviwedzera kubhurogi rako uchishandisa iyo Polyblog dashboard. Paunenge uchinge wazvishambadza, zvemukati zvinoenda zvichirarama pane yako blog.
3. Tevera kukura kwako SEO pane yako yekutsvaga console
Isu tichatarisira tekinoroji SEO kwauri. Isu tichagadzira otomatiki mamepu uye toaisa kune yako Google Search Console. Zvese zvaunoda kuti uite kutevedzera kukura kwako paGoogle Search Console.
Ndinogona kushandisa domain yakasarudzika?
Hongu, unogona kushandisa dura retsika nehurongwa hwedu hwese. Iwe unongofanirwa kuseta yako domain nesystem yedu.
Ndeupi musiyano uripo pakati pePolyblog uye mamwe masisitimu ekugadzirisa zvemukati?
Polyblog yakanyatsogadzirirwa mitauro yakawanda manejimendi. Kune akawanda mabhenefiti ekushambadzira emitauro yakawanda asi kazhinji kuzviita kwakaoma. Polyblog inoita kuti zvive nyore kwazvo kubata uye kusimudzira blog yemitauro yakawanda.
Ini ndinofanira kukwirisa bhurogu yangu yekumhanyisa peji uye zvimwe zvehunyanzvi SEO zvinhu?
Kwete, Polyblog yakatogadziridzwa kune ese akakosha ehunyanzvi SEO zvinhu senge peji kumhanya, chinongedzo chimiro, sitemap, meta tags, nezvimwe.
Polyblog yakanyatsogadzirirwa kutanga iyo inoda kukurumidza uye inopindura blog kune yavo yekutanga yekushambadzira zvemukati rwendo.
Ini ndinofanira kuisa plugins uye themes?
Polyblog yatouya neyakachena, inopindura dingindira uye ese maficha aunozoda akaiswa kare. Nenzira iyi unogona kutanga neblog rako nekukasira uye kunyatso tarisa pakuburitsa zvemhando yepamusoro pasina kunetseka zvakanyanya nezvehunyanzvi.
Unogona kundiratidza muenzaniso weblog rakavakwa nePolyblog?
Chokwadi, tarisa iyo blog yemumwe wevatengi vedu vepamusoro: https://www.waiterio.com/blog
Tinyorerei zvedu tichingoti Hello